IBungalows ziyathengiswa kunye neRent kuRomney Marsh, Kent
Akukho khonkco, i-bungalow evaliweyo enesicwangciso esivulekileyo sokuhlala kunye namagumbi amahle okulala. Kubekwe kakuhle ukuze ube nokuhamba nje okufutshane kumanxweme amdaka kunye nesixeko sedolophu. Nceda ubhekise kumbhalo wamanqana ngokubhekisele kwiinkonzo kunye nezinto zombane.Osayizi: Ukungena kwe-HallDining Area 15'3 (4.65m) x 10'10 (3.30m) kunciphisa ...
Inkcazo eneenkcukachaUkubhalwa kule ndawo ibekwe kakuhle kwindawo ebonakalayo inika indawo yokuhlala efanelekileyo, ebandakanya igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokutyela, amagumbi amabini okuhlamba, igumbi lokuhlambela / igumbi elimanzi, igumbi elangeni kunye nesifundo. Ipropathi ngoku ifuna ukuphuculwa ngokubanzi kunye nokuphuculwa kwaye inikezela ngokubaluleka ...
Indawo iphambili xa ujonga ikhaya elitsha kwaye le mpahla ayiyi kudanisa. Kubekwe kumda wedolophu nge-Rype (ilali yelali yeLydd) emva kwakho kwaye umbono ongaphazanyiswanga wentsimi ngaphambili kwepropathi le yindawo entle. Ukuba ujonge elo lizwe lihle ...
Kukho igumbi lokulala eli-3 phakathi kweyona ndawo iphambili yale bungles yegumbi lokuphumla kunye negumbi lokulala leendwendwe kunye negumbi lokuhlambela elingena kwi-cinema yegumbi lokuphumla (ukufikelela kwigaraji yangaphambili) okanye igadi. Iindlela zobukhulu: I-Entrance HallLounge 16'6 x 12 ' (2mx 5.03m) Ikhitshi / isidlo sangokuhlwa 3.71'23 (9m) x 7.24'13 (8m) sinqamleze kwi-4.17'10 (...
Indawo enamagumbi okulala enendawo yokuhlala encinci ebekwe kwindawo ebonakalayo kwindawo yokuphumla yelali edumileyo yaseDymchurch kufutshane nonxweme lolwandle. Eli khaya licocekile kunye ne-UPVC ngokugqobhoza iminyango kwaye iminyango ikulungele ukungena ngqo kwaye izibonelelo ezivela ekhitshini, kwigumbi lokutyela, eLounge, ...
Yiza ujonge le bangalow icekeceke egcina inkangeleko yayo yentsusa kunye nesazisi, ebekwe kwindawo yokuhlala ezolileyo enokufikelela kwendlela yabucala.Iindlela zobukhulu: I-Entrance HallLounge 18'11 x 10'0 (5.77mx 3.05m) Indawo yokutyela 13 '9 x 8'6 (4.19mx 2.59m) Ikhitshi 8'7 x 6'5 (2.62mx 1.96m) Igumbi lokulala 1 ...
Ubekwe kwindawo enoxolo ngaphandle kwendlela eLydd kuLwandle nje umgama omde ukusuka elwandle kwaye ukufutshane nezinto ezilapha ekhaya uyakufumana indawo eboniswe kakuhle, indawo evulekileyo ye-bungachedow.Likhaya lilungele ukuba ungene kwaye umnini okwangoku wenze yonke imisebenzi kuwe nge-boiler engaphantsi ...